အချစ်စစ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ကြတာလဲ?
Home Relationship အချစ်စစ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ကြတာလဲ?
တကယ်ကြီးချစ်တာပါလို့ ထင်ထားကြပေမယ့် အချိန်ကြာလာတော့ အဲ့ဒီခံစားချက်က အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ သိလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြတ်မရတဲ့ နှောင်ကြိုးတွေနဲ့ ချည်ထားမိနေပြီ။ အခြေအနေတွေက နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး မပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ဒီအတိုင်းဖြတ်သန်းနေတဲ့ လူတွေကို တွေ့ဘူးကြမှာပါ။ သာယာမှုတွေကို အချစ်လို့ထင်မှတ်မှားပြီး တကယ့်အချစ်စစ်နဲ့ မလွဲကြရဖို့ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ဘဝစာချစ်တယ်လို့ သေချာစေမယ့် အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေနေစေဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲမကြိုးစားရဘူး
အရှိကိုအရှိတိုင်းဆက်ဆံလို့ရတယ်။အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ကြရင်လည်း ခဏဘဲ။ တစ်ယောက်ယောက်က အလျော့ပေးလိုက်လို့ ပြန်ပြေလည်သွားတာကြီးဘဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုး ရှိနေမလဲဆိုတာ ပြောစရာမလိုဘဲ သိနေတတ်ကြတယ်။ တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်နေတတ်ကြတယ်။ ဝေးဖို့အကြောင်းကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မတွေးထားတတ်ကြပါဘူး။
ဘဝတစ်ခုလုံးကို အတူတူဖြတ်သန်းဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေတတ်ကြဘူး
ဟာ ဒီမိန်းမ ဒီလောက်ရစ်တာ တစ်သက်လုံးသာအတူတူနေရရင် မလွယ်ဘူး။ ဟာ ဒီယောက်ျားကတော့ စိတ်ထင်ရာလျောက်လုပ်တတ်တာ ဘာတစ်ခုမှလည်း စဉ်းစဉ်းစားစားရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ရေရှည်မှာဆို ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးတွေရှိမနေကြဘဲ အတူတူရှိနေကြရင် ဘယ်လိုပျော်နေကြမယ်၊ မနက်အိပ်ရာနိုးလို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်နံဘေးမှာ သူရှိနေပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုတွေးပြီး ကြည်နူးနေတတ်ကြပါတယ်။ အတူတူသာဆိုရင် အားလုံးရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြပါတယ်။
“ဝ” လို့၊ပိန်လို့ အစရှိတာတွေ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မလှပတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေ အားနည်းချက်တွေကို ရှက်ကြောက်မနေတတ်ကြပါဘူး
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ပြီဆိုရင် ဘာတစ်ခုမှ ကြားခံနယ်အဖြစ်ရှိမနေကြတော့ဘဲ လျို့ဝှက်ချက်ဆိုတာမျိုး၊ ဖုံးကွယ်ထားတာမျိုးတွေရှိမနေကြတော့ပါဘူး။ အရှိကို အရှိတိုင်းလက်ခံတတ်ကြပြီး ချစ်ခြင်းကို ဘာနဲ့မှ တန်ဖိုးလျော့ကျသွားအောင်မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ ပိန်လည်းချစ်တာဘဲ၊ “ဝ”လည်းချစ်မှာဘဲ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ အတူတူရှိနေကြရင် နွေးထွေးလုံခြုံအေးချမ်းတာမျိုးကို ခံစားရတယ်။
နေ့ရက်တွေတိုင်းက ပျော်စရာတွေကြီးဘဲလို့ ခံစားရစေတတ်ပါတယ်
ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိနေမှ လိုချင်တာတွေအားလုံးပြည့်စုံနေမှ ပျော်စရာလို့ မတွေးကြတော့ဘဲ ဘာတစ်ခုမှ ခမ်းခမ်းနားနားမရှိလည်း ပျော်နေတတ်ကြတယ်။ အတူတူဘတ်စ်ကားတိုးစီးတာမျိုး၊ လက်ခြင်းတွဲလမ်းလျောက်ရတာမျိုး၊ ပြသနာတွေရှိလာပြီဆိုရင်တောင် အတူတူရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတာကို ပျော်စရာလို့တွေးတဲ့အထိကို ချစ်ခြင်းရဲ့အင်အားတွေနဲ့ လန်းဆန်းနေတတ်ကြပါတယ်။ အတူတူရှိနေရတာကိုက တကယ့်ပျော်စရာဘဲ မဟုတ်လား။
Previous articleထင်ရှားတဲ့ ဘီလျံနာ၁၈ယောက်ရဲ့ သူကြွယ်မဖြစ်ခင်က ပုံပန်းသဏ္ဍာန်များ
Next articleအသားအရေကို ဖြူဝင်းတောက်ပလာစေမယ့် အိမ်တွင်းပေါင်းတင်နည်း (၃) မျိုး